Raw Flibanserin powder (167933-07-5) hplc =98% | Kushandiswa Kwechikadzi Kushandisa
/ Products / Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni / Kushandiswa Kwechikadzi / Flibanserin powder
SKU: 167933-07-5. Categories: Kushandiswa Kwechikadzi, Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukurongeka kweFlibanserin powder (167933-07-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Raw Flibanserin powder Basic Characters
Raw Flibanserin kushandiswa kwehupfu
Flibanserin zita rekutengeserana rinosanganisira Ectris naGirosa, uye zita rayo rekare rekutsvaga kwekodhi raiva BIMT-17, ikozvino zita rechiratidzo ndiro Addyi.
Raw Flibanserin powder Usage
Dhiyabhorosi yeDFA inobvumirwa neFlibanserin 100mg zuva nezuva panguva yekurara yakawedzera nhamba yezviitiko zvinogutsa zvepabonde (SSEs) kubva kune imwe yekutanga kune imwe chiitiko pamwedzi kana ichienzaniswa ne placebo. Tora Flibanserin pane imwe nguva kunze kwekurara kunogona kuwedzera mungozi yako yekuderedza ropa, kupera (kurasikirwa kwekuziva), nekukuvara nekukurumidza.
Warning on Raw Flibanserin powder
Flibanserin haisi yekurapa HSDD kuvakadzi vakambomira kupedza mimba kana varume, kana kuti kuvandudza kuita zvepabonde. Uye kwete kushandiswa muvana.
Flibanserin pakutanga yakagadzirwa sechirwere chinotapukisa asati agadziriswa kurapwa kweHSDD. Chikamu chepamuviri cheFlibanserin chizivo, kusuruvara kunoitika kanenge katatu kana kanowedzera kakawanda uye kurara, kunzwa kuneta.
Nzira yekutenga Flibanserin powder kubva kuAASRAW
MASHOKO anopa hupombwe 98% Flibanserin poda yakasvibira kumawere pasi pevhu kana vashandisi vevakadzikadzi vanokurudzira.